Xog iyo Gorfeyn: Dawladda Deegaanka Khaatumo: Ilaalinta midnimada Somalia - Caasimada Online
Home Maqaalo Xog iyo Gorfeyn: Dawladda Deegaanka Khaatumo: Ilaalinta midnimada Somalia
Xog iyo Gorfeyn: Dawladda Deegaanka Khaatumo: Ilaalinta midnimada Somalia
Khaatumo state of Somalia ayaa ah maamul u dhisan habkii dawladii xornimadoonka ahayd ee daraawiishta taas oo uu gundhig u ahaa ilaalinta midnimada iyo xornimada shakhsiga Soomaaaliga ah. Dawladii daraawiishta oo lawada ogyahay halgankii dheeraa ee ay u gashay jiritaanka umada Soomaaliyeed waxaa saldhig u ahaa deegaan qalalaasaha ka jiraa ay wali sabab u tahay ilaalinta midnimada iyo jiritaanka umada Soomaaliyeed.
Deegaankaasu waa deegaan leh baaxad iyo dhul istraatiigi ah taas oo halgamayaashiii daraawiishtu u door bideen inay saldhig iyo udub dhexaad u noqoto halgankoodii xornima doonka ahaa.maqaalkan waxaan uga gon leeyahay inaan ku ifiyo in Soomaalia ay leedahay dad mar kasta u taagan midnimada iyo jiritaanka umada Soomaaliyeed taas badalkeedana kula kulma caqabado siyaasadeed, dhaqaale iyo waliba faragalin ciidan.
Khaatumo waxay ku taalaa waqooyiga Soomaalia halkaas oo uu gumaystihii ingiriisku mariyay calaamadii xadaynta inkastoo dadka daganaa dhulkan khaatumo ay ahaayeen kuwa gumaystahaasi kala horyimi halgan hubaysan oo ay ahaayeen dadkii ugu horeeyay bariga afrika ee la dagaalamay sancadaalihii gumaystaha ahaa ee ingiriiska. Deegaankan waxa uu ka mira dhaliyay hamigiisii ahaa masaxida xad beenaadka Soomaali lagu kala xayndaabay waxayna calankoodii dharaar cad kula midoobeen Soomaalidii koonfurta oo iyaguna ahaa kuwo la harjadaya hagardaamooyinkii gumaysataha talyaaniga. Waxay Soomaalidu noqotay kuwa fahmay waxa ay dadka deegaanka khaatumo ay mar hore fahmeen u hureen dhiig iyo dheefba ayna ku waajaheen baqoortooyadii aduunka abid ugu wayneed xilligan casriga ah, ingiriiska. Kadiba yagleelidii Soomaalidii waqooyi iyo koonfureed dadka reer khaatumo waxay u jeesteen u adeegida danta guud iyagoo si kastaba qayb laxaadleh uaga ahaa dawladihii soo maray dalka Soomaalia. Nasiib darro, Soomaalia waxay ku dhacday hog ay adagtahay inay ka baxdo waxayna dhuunta u gashay cadaw awalba u hamuun qabay Soomaaliduna waxay noqdeed dadka ugu nugul umadaha caalamka waxayna hoos uga dhaceen xaalkii ay ku jireen xilligii gumaystaha waxaana helay cadaw aan ill iyo baartoon reebin. Waxaa lagama maarmaan noqotay in la helo dad u istaaga badbaadinta umadan sidii ay daraawiishtu u badbaadiyeen waxay qaadatay waqti badan in la helo dadkaas waxaana Soomaaliyada burburtay ka da’ayay dhiig iyo musiibooyin aan tiro lahayn waxaa kamid ahaa fikradaha dib daxalka looga tiray tii ay aabayaashi shacabka khaatumo u shahiideen ee ay gumaystihu uga caal waayeen inay maalin un mariyeen shacabka khaatumo arintaasi oo ah ” kala goynta umada Soomaaliyeed”. Khaatumada casriga ah waxay u istaagtay ka hortagida aaxooyinkaas qabyaaladaysan ee lagu kala goynayo umada Soomaaliyeed. Waxaanan waqtigan la soconaa inay Soomaaliya ka socdaan dagaalo ku slaysan qabyaalada kooxo diimeed iyo maamulo dhul isku haysta. Dagaalka aan joogsiga lahayn ee ka socda waqooyiga Soomaalia waa mid in badan oo Soomaaaliyeed ay saari la yihiin qaar ayaa ku sifeeya
– Mid qabiil
– Dhul durugsi
Dhamaan fikradahaasi waxay hareer mareen qeexida halganka barakaysan ee shacuubta khaatumo. Ma ahan mid qabiil, waayo qabiilka khaatumo dagaai waxaa jenbiga ku haya mid ay isu isir dhaw yihiin gurmad iyo gaashaana uma loodiyaan. Ma ahan mid dhul durugsi, waayo waxay ka socon lahayn hareeraha kalle. Mana ahan mid maamulo. Waa dagaal u dhaxeeya ” midnimada iyo kala goynta “mana ahan dagaal ku cusub mandiqadan waa kii uu halyeeygii Soomaaliyeed kana soo jeeday khaatumo uu lahaa
Anagoo taleex naal jihaad taladii soo qaadnay.
Waxaan kusoo gunaanadayaa shacabka khaatumo oo taariikh fac wayn u leh ilaalinta midnimada iyo sharafka umada Soomaaliyeed , Soomaaliya ma u abaal celin doonta mase waxay mari doontaa wadadii hore ee ay kaga abaal ka dhaceen agoomihii ay ka tageen halgamayaashii daraawiishta. Waxaana taas barbarsocda in shacabka khaatumo aysan ilaah mooye aysan cid kalle kaashanayn kii u dhintay dharafka iyo qiyamka diintiisa iyo dalkiisa ilaah ayaa barakaynaya. Suaashanu waxay gunaanad u tahay maqaalkan. Waa maxay cida masuuliyada u saartay shacabka khaatumo ilaalinta midnimada Soomaaliyeed ?
W/Q. Dr. Cabdijaliil Mohamed